FINAL-KA SOOMAALIYA Vs TANZANIA – Radio Muqdisho
FINAL-KA SOOMAALIYA Vs TANZANIA
Soomaaliya ayaa la Ciyaari doonto kama danbeysta tartanka Cecafa ee 17-Jirada dalka Tanzania oo ka soo adkaaday dalka Kenya afar dhamaadka tartanka.
Soomaaliya waxay 1-0 ku soo qaarijisay xulka qaranka Uganda oo ahaa dalka koobka difaacanayay ayadoo ay ka sii horeysay Soomaaliya in ay ka soo adkaatay xulka qaranka Kenya oo koobka ahaa dalka loo saadliyay dalalka ku guuleysan karay bilowgii tartanka.
Tanzania iyo Soomaaliya ayaa Ciyaari doono kama danbeysta tartanka oo Soomaaliya ay markii ugu horeysay u soo baxday waana mid ka mid ah guulaha xulka qaranka 17-jirada ay soo hooyen kuwaasi oo tartankaan kan xiga ka qayb qaadan doono Koobka qaramada qarada afrika ee 17-Jirada oo ka bilaaban doono dalka Tanzania bisha agoosto.
Soomaaliya dhalinteeda ayaa haatan iska sii tijaabin doona dalka Tanzania oo safar ay u aadi doonan bisha aynu soo sheegnay waxaana Soomaaliya Wiilasheeda ay ahayeen kulamadii ugu danbeyay kuwa si isku mid ah dunida oo dhan kaga yaabiyay.
Dhageyso: Wasiir Khadiijo oo u hambalyaysay Xulka Qaranka dalkeena